Ra'iisul Wasaare Rooble oo helay Kalsoonida Baarlamaanka
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa codka kalsoonida siiyay Ra'iisul Wasaaraha cusub, Maxamed Xuseen Rooble oo 17-kii bishan uu magacaabey Farmaajo, isagoo bedalaya Khayre oo 25-kii July xilka looga qaadey Mooshin uu Gollaha Shacabka u codeeyay.
Gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxanmed Mursal ayaa ku dhawaaqay in 215 mudane oo soo xaadirtay kulankii Maanta ay codka kalsoonida siiyeen Rooble, isagoo intaasi ku daray inaysan jirin Xildhibaano diiday ama ka aamusay.
Mursal ayaa xusay in Rooble la dhaarin doono markale, maadaama uusan kulankii maanta tagin Madaxweyne Farmaajo oo la filayay inuu khudbad ka jeediyo, iyadoo aan la shaacin sababta baaqshadiisa.
Xil la wareegida Rooble oo dab ku shiday qalalaasaha dhanka dastuurka
Soomaliya 28.09.2020. 10:00
57-jirkan laga filayo in uu soo dhiso xukuumad cusub ayaa u muuqda mid ku dhacay laygii ugu horeeyay.
Falcelinta xulashada Maxamed Xuseen Rooble iyo fariimaha loo diray
Soomaliya 18.09.2020. 11:25
Dowlada Farmaajo oo bilowday fulinta balanqaayaddii ay ka gaabisay
Soomaliya 14.10.2020. 08:25
Caqabadaha iyo fursadaha horyaala ra'iisul wasaaraha magacaaban
Soomaliya 18.09.2020. 09:50
Maxamed Rooble: Soomaaliya oo yeelatay ra'iisul wasaare cusub
Soomaliya 17.09.2020. 23:50
Xukuumada oo raaligelin ka bixisay xiritaanka jidadka Muqdisho
Soomaliya 13.10.2020. 16:26
Mashruuc haysta maalgelin caalami ah oo laga dhagax dhigay Muqdisho
Soomaliya 15.10.2020. 16:55
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo Muqdisho kula kulmay diblumaasiyiin
War Saxaafaded 13.10.2020. 16:21